Dowladda oo shaacisay khasaaraha ka dhashay Qaraxii ka dhacay Sayidka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Taliska Ciidanka Booliska dowladda Federaalka ayaa ka hadlay Qarax gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo ka dhacay Isgoyska Sayidka ee Magaalada Muqdisho gaar ahaan Bar koontarool oo laga ilaaliyo Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya.
Qoraal kasoo baxay Taliska Booliska ayaa waxaa lagu sheegay in gaariga qarxay oo noociisu ahaa NOAH uu xoog kusoo maray Bar koontarool oo Ciidanka Booliska dowladda ku leeyihiin meel ku dhow Isgoyska Dabka, kadibna la rasaaseeyay, sidaasina qarxay gaariga Isgoyska Sayidka Muqdisho halka laga ilaaliyo Xarunta Madaxtooyada.
Booliska dowladda ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhashay khasaaro dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah oo goobta Agdhawaa, waxaana goobta ku dhaawacmay 7, kuwaasi oo Xarumo Caafimaad oo ku yaalla Magaalada Muqdisho la geeyay.
“Qaraxa ayaa dhacay dadka oo ka feejignaa dhawaqa rasaasta iyo qeylo-dhaanta Ciidanka, kaas oo sababay qasaare dhaawac oo gaaray ilaa 7 qofood iyo burbur hantiyeed oo ah 8 gaadiid ah iyo 9 Mooto Bajaaj, walow aysan jirin wax qasaare dhimasho ah oo dadka ka soo gaaray goobta, marka laga reebo naftii haligihii waday gaariga qarxay.” Ayaa lagu yiri Qoraalka kasoo baxay Taliska Booliska.
Gaariga laga buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa isku dhex qarxiyey gaadiid saf ugu jiray inay ka gudbaan koontaroolka Sayidka ee lagu hubiyo gaadiidka aada dhinaca Xarunta Madaxtooyada iyo Mooto Bajaajto taagnaa Isgoyska, xiligii uu qaraxu dhacayay.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa tegay aaga uu qaraxu ka dhacay oo xiray halkaas, waxaana Sawirro halkaas laga soo qaaday lagu arkayay gaadiid badan oo burbur xoogan soo gaaray iyo Xarumo Ganacsi ah.